यो गुप्त सीपीए टुकी 2.0 - सरल प्रभावकारी टुकी कसरी सिर्जना - टुकी दिन
यो गुप्त सीपीए टुकी 2.0 – सरल प्रभावकारी टुकी कसरी सिर्जना
नमस्कार Jesisco यहाँ,
ठूलो अस्वीकृति : परिणाम विशिष्ट छैनन्. म तपाईंलाई नै परिणाम प्राप्त हुनेछ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छैन छु. तपाईं कम हुन सक्छ, कुनै पनि वा उच्च. यो तपाईं सबै माथि छ.
तपाईंको रुचिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गुप्त सीपीए टुकी संस्करण 2.0. म भन्दा कम मा एक सीपीए संबद्ध रूपमा sucessful बन्न कुनै रणनीति भएको लिए सम्भव सही कदम रूपमा धेरै विवरण तपाईं देखाउन यो कार्य धेरै राख्नु छ 21 दिन.
म तपाईं को लागि पूर्ण सोली निर्माण, तपाईं अन्त मा नि: शुल्क डाउनलोड सक्छ वा यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं आफैलाई निर्माण गर्न सिक्न सक्छ. म यसलाई सम्भव अर्को पृष्ठमा निःशुल्क चरण निर्देशन द्वारा चरण गरिएका.
तर पहिलो कुरा पहिलो…
सीपीए मार्केटिङ के
सीपीए मार्केटिङ वा प्रति अधिग्रहण लागत (सीपीए), यस्तो पनि भनिन्छ “प्रति कार्य लागत” वा प्रति अधिग्रहण तिर्न (PPA) र प्रति रूपान्तरण लागत, अनलाइन विज्ञापन मूल्य निर्धारण मोडेल विज्ञापनदाता निर्दिष्ट अधिग्रहण लागि दिन्छिन् कहाँ छ – उदाहरणका एक बिक्री को लागि, क्लिक, वा फारम पेश (उदाहरण, सम्पर्क अनुरोध, समाचार पत्र साइन अप, दर्ता आदि).
तपाईं सीपीए प्रस्ताव वा अनुप्रयोगहरू प्रचार को लागि एक आयोग वा शुल्क कमाउन.
पदोन्नति मार्फत गर्न सकिन्छ :
 इमेल अभियान
 खोज (खोज इन्जिन)
 सामाजिक मिडिया ...
जो स्वीकृत विधि…
तपाईं आफ्नो उत्पादन बनाउन र एक सीपीए बजार रूपमा ग्राहक समर्थन सामना गर्न आवश्यक छैन. र सही गरेको भने यो व्यापार मोडेल रूपमा धेरै लाभदायक हुन सक्छ.
के तपाईं सफल गर्न आवश्यक छ : ज्ञान + कार्य
तपाईं यहाँ पहिलो हुनेछ (ज्ञान). कार्य लिइरहेको तपाईंको हो. तपाईं कार्य भने तपाईं केहि देख्ने. भन्न दु: खी. तर म यो धेरै लागि स्पष्ट गर्न चाहन्थे.
सर्वश्रेष्ठ सीपीए नेटवर्क
केही प्रस्ताव वा अनुप्रयोगहरू बीच तपाईं ल्याउन सक्छ $0.1 गर्न $15 प्रति कार्य सम्पन्न. र तिनीहरूले सबै भन्दा लोकप्रिय सीपीए नेटवर्क मा फेला पार्न सकिएन. र सामेल बिल्कुल मुक्त. म एक चयन र एक नौसिखिया रूपमा लीन सल्लाह थियो.
सर्वश्रेष्ठ सीपीए सोली
गरेको यो मान गरौं – हामीले बितायेउ $20 यातायात प्राप्त गर्न (100 लक्षित clics) तिर्ने $2/ पूरा कार्य एक सीपीए प्रस्ताव बढाउन.
को commoun तरिका
सामान्यतया यहाँ मान्छे कसरी सीपीए प्रस्ताव बढावा : तिनीहरूले अवतरण पृष्ठमा यातायात ड्राइव (एक निचोड पृष्ठ / एक presell पृष्ठ / एक साइट ...) र बित्तिकै संभावना रूपमा आफ्नो पत्राचार सूची सामेल, उहाँले सीपीए प्रस्ताव पुनः निर्देशित छ. यो विधि काम. तर यो मेरो «गुप्त CPA सोली» एक भन्दा कम लाभदायक छ.
यहाँ बाट विशिष्ट परिणाम 100 क्लिक
हामीले पायौ 40 optins
लागि 37% रूपान्तरण दर हामी पायो 15 पूरा कार्यहरू.
त्यो हो $30 राजस्व रूपमा
$10 लाभ. हामी लाभ हुनुहुन्छ.
कहिलेकाहीं मानिसहरूले सीधा प्रस्ताव गर्न यातायात ड्राइव र साधारण भन्दा कम प्राप्त 10% रूपान्तरण दर.
यहाँ विशिष्ट परिणाम पनि देखि 100 क्लिक
10 पूरा कार्यहरू
त्यो हो $20 राजस्व रूपमा
$0 कुनै हानि कुनै लाभ. हामी व्यापार मा हुनुहुन्न.
गुप्त सीपीए टुकी – सीपीए आयोगहरु दुर्घटनामा नयाँ तरिका
तपाईं draffic ड्राइभिङ अघि ठाउँमा «गुप्त CPA सोली» आवश्यक.
के एक «गुप्त CPA सोली» ?
यो कि दोहोरो गर्न वा आफ्नो «लाभ» एउटै यातायात देखि तीन अनुमति दिन्छ धेरै CPA प्रस्ताव वरिपरि निर्मित सोली छ. यो लगभग मुफ्त को लागि आयोगहरु बनाउन मद्दत गर्छ.
(त्याग: केही संबद्ध लिंक समावेश)
तपाईं आफ्नो गुप्त CPA सोली सेट अप गर्न उपकरण निम्न गर्नुपर्छ :
 एक साइट (डोमेन नाम) र / वा clickfunnel
3गर्न4CPA प्रस्ताव (संबद्ध प्रस्ताव पनि काम)
प्रक्रिया – गुप्त सीपीए टुकी को दर्शन
हामी हाम्रो लक्षित ड्राइव 100 अवतरण पृष्ठमा clics. आफ्नो पहिलो CLIC प्रस्ताव गर्न जान्छ. पहिलो एक CPA प्रस्ताव छ ($2 यदि पूरा) र दोस्रो हाम्रो optin पृष्ठ हो.
र यदि हामी त्यही तथ्याङ्क राख्न, यहाँ हामी नतिजा रूपमा के छ :
बाट 100 clics हामी पायो 40 optins.
हरेक optin सुराकी जहाँ CLIC ले गुणन गरिनेछ पुष्टि पृष्ठमा निर्देशित छ2फेरि. अर्को CPA प्रस्तावको लागि पहिलो ($2 यदि पूरा) तपाईंले पृष्ठ धन्यवाद दिन र दोस्रो जान्छ.
हामी संग छ2CPA कि पृष्ठमा प्रदान गर्दछ पूरा गर्न. $2/कार्य.
लगभग हामी बनाउन सक्छ $2+$2+(2*$2)= $ 8 / नेतृत्व
त्यो भन्दा बढी छ $320 सबै ती लागि 40 optins. तपाईं अझै पनि एक thorugh प्रस्ताव प्रचार सक्ने उल्लेख5day email series. लाभ छ $300 र हामी लागि हाम्रो सूची निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ.
भनेर हामी कल के «गुप्त CPA सोली» छ. त्यो सोली एक देखि $ 6-8 $ / नेतृत्व बैंक मदत गर्छ $2 CPA प्रस्ताव. उच्च भुक्तानी राम्रो.
तपाईं सोली यस प्रकारको सिर्जना गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं मद्दत वा थप विवरण आवश्यक भएमा मलाई थाहा .... वा चरण ट्युटोरियल मेरो चरण यहाँ जानुहोस्.
तपाईं जान अघि, यहाँ तपाईंको तपाईं टुकी लागि गरिन्छ, तपाईं तपाइँको निर्माण गर्न समय छैन भने. म clickfunnels मार्फत यसलाई साझा छु यसलाई डाउनलोड गर्न तपाईं आफ्नो खाता आवश्यक त. तपाइँको सिर्जना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो गुप्त CPA सोली डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
अब के अर्को छ? लिन कार्य र आफ्नो सोली गर्न यातायात ड्राइभिङ सुरु. बस.
थप सहयोग को लागि, तपाईं हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ [email protected]
तिमीलाई धेरै शुभकामना
-दिन टोली को टुकी